Football Khabar » बार्सिलोनाद्वारा भाल्भर्डेलाई बर्खास्त गर्ने तयारी !
बार्सिलोनाद्वारा भाल्भर्डेलाई बर्खास्त गर्ने तयारी !
स्पेनिस बार्सिलोनाले आफ्ना पदेन प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ । स्पेनका अधिकांश मिडियाले यो खबर छापेका छन् कि, मंगलबार र बुधबार बार्सिलोनाको बोर्ड बैठक बस्दैछ । सो बैठकको एक एजेन्डा भाल्भर्डेलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने पनि हुनेछ ।
‘आरएसी वान’का अनुसार बुधबार बस्ने बैठकले भाल्भर्डेलाई पदबाट हटाउने उच्च सम्भावना छ । अघिल्लो दिन क्लबका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउले भाल्भर्डेलाई क्लबले निरन्तरता दिने बताए पनि बोर्डका अधिकांश अधिकारी उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लाइनमा उभिएपछि बार्टोमेउमाथि दबाब बढेको छ ।
अन्य स्पेनिस मिडियाले पनि बार्सिलोनाले भाल्भर्डेलाई हटाउने अन्तिम तयारी गरेको खबर छापेका छन् । तीन साताको बीचमा युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे बाट आउट भएपछि भाल्भर्डेको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:३४